Xeeladahan macruufka ah ee iOS 13 ayaa noloshaada kuu fududeyn doona, ha moogaanin iyaga | Wararka IPhone
Xeeladahan macruufka ah ee iOS 13 ayaa noloshaada kuu fududeyn doona, ha moogaanin
Sidaad ogtahay, Waxaan si qoto dheer u tijaabinaynay iOS 13 dhowr toddobaad, Waxaan tan u sameynaa sababtoo ah waxaan dooneynaa inaan kugu wargalinno wararka ugu xiisaha badan ee shirkadda Cupertino ay maanka ku hayso adiga iyo iPhone-gaaga. Markan waxaan keenaynaa taxano taxane ah oo aan laga dareemin macruufka taasna shaki la’aan waxay horumarineysaa nolol maalmeedkaaga iyo wax soo saarkaaga.
Nagala soo bax oo ah xeeladaha ugu xiisaha badan ee iOS 13 oo fududeynaya isticmaalkiisa iyo in aadan hubin, Miyaad sii joogi doontaa adiga oo aan ogaan? Aad baan uga shakisanahay ahead Hore u soco!
Waxaa laga yaabaa inaad taqaanno qaar ka mid ah khiyaanooyinkaas ama xitaa horay ayaan uga soo hadalnay, Laakiin ujeedku waa in halkaan lagu soo ururiyo maxay yihiin wararka ugu xiisaha badan si aad u ogaatid sida macruufka 13 uu u beddelayo habka aad u isticmaasho iPhone-kaaga, maxaa yeelay ujeedka ugu dambeeya ee mid kasta oo ka mid ah cusbooneysiinta macruufka ma ahan oo keliya inuu u shaqeeyo si ka wanaagsan ama ka dhakhso badan. , waxay la mid tahay sida loogu talagalay in lagu daro shaqeynta, gaar ahaan qaar ka mid ah dadka isticmaala ay dalbanayeen sanado badan.
1 Ugu dambeyntii waad ka beddeli kartaa shabakadda WiFi Xarunta Xakamaynta
2 Ma ka daashay cusbooneysiinta barnaamijyada aadan adeegsan? Ka tirtir App Store
3 Nabad gelyo wicitaano wicitaanno ah, xir nambarada gaarka loo leeyahay
Ugu dambeyntii waad ka beddeli kartaa shabakadda WiFi Xarunta Xakamaynta
Xarunta Xakamaynta waxay heshay awoodo cusub kadib cusboonaysiinta iOS 12, iyo wixii ka sarreeya oo dhan waxay u mahadcelineysaa awoodda 3D Touch ee hadda laga heli karo dhammaan aaladaha iOS iyadoon loo eegin inay haystaan ​​qalabka lagama maarmaanka ah iyo haddii kale. In muddo ah hadda waxaan ku cadaadin karnaa si adag ama dheer astaanta WiFi ee Xarunta Xakamaynta tanina waxay noo ogolaatay inaan ku aragno jaleecista shabakadda WiFi ee aan ku xirneyn, hase yeeshe, tani way is bedeshay si loo qanciyo codsiyada tiro yar oo adeegsadayaal ah.
Markii aan fureyno xarunta xakamaynta oo aan balaadhino macluumaadka isku xirnaanta, hada hadaan sameyno saxaafad dheer oiWaxaan ugu yeernaa 3D Touch astaanta WiFi, waxaan awoodi doonnaa inaan aragno liistada shabakadaha WiFi ee la heli karo sidaas darteedna aan awoodno inaan dooranno midka aan aadka u jecel nahay. Shaki la'aan tani waa war wanaagsan, gaar ahaan markaan guriga joogno, halkaas oo ay ku sii kordhayso caadi ahaan inaan yeelano laba nooc oo shabakado ah, shabakad caadi ah oo 2,4 GHz WiFi ah iyo shabakad 5 GHz ah oo bixisa xawaare sare oo isku xirnaanta ah Si loo waxyeeleeyo farqiga calaamadaha, waxaan ma dhihi karo ma sugeyno shaqadan cusub.
Ma ka daashay cusbooneysiinta barnaamijyada aadan adeegsan? Ka tirtir App Store
Marar badan ayaan ilaawnaa inaan hayno codsi. Waxay na siinaysaa hubin dhab ah markaan galno App-ka App Store oo aan sii wadno cusbooneysiinta. Taasi waa marka aan isweydiinno: "Oo maxaan u rakibey codsigan haddii aanan isticmaalin shan sano?". Boosku aad ayuu muhiim ugu yahay taleefannadeena iPhone-ka inkasta oo Apple ballan-qaadday in codsiyada culeyskoodu saddex jeer ka yaraan doono. Marka hadda waxaan awood u yeelan doonnaa inaan tallaabo toos uga qaadno qaybta cusbooneysiinta ee iOS App Store, maxaan uga jeednaa tan?
Hagaag hadda si aan u cusbooneysiino barnaamijyada ku jira iOS waxaan u baahannahay inaan gujino astaantayada xagga sare oo waxay noo geyn doontaa qeyb aan ku arki doonno codsiyada sugaya inaan rakibno. Tan waxaa lagu sameeyaa Apple iyada oo ujeeddo cad laga leeyahay, in aan dhaqaajino cusbooneysiinta otomaatiga ah si aan noo badbaadiyo nidaamkan adag. Si kastaba ha noqotee, haddii aad weli doorato inaad cusbooneysiiso barnaamijyadan gacanta, Apple ayaa kuu oggolaan doonta inaad ka saarto istaroog marka aad ogaato inaadan dhab ahaan u baahnayn, tan awgeed waxaan si fudud ugu qasbannahay inaan uga siibanno midig ilaa bidix arjiga oo howsha "ka saarista" codsigu u muuqan doono, sida marka aan tirtirno farriimaha ama emaylka. Sidan ayaad awoodi doontaa inaad si dhakhso leh uga takhalusto codsiyada aad si joogto ah u cusbooneysiiso laakiin aadan dhab ahaan u adeegsan.
Nabad gelyo wicitaano wicitaanno ah, xir nambarada gaarka loo leeyahay
Yaan ku dhibsan badhtamaha wakhtiga hurdada oo uu iibiyo qof raba inuu ku iibiyo badeecada waajibaadka saaran? Haddii aanad wali ka mid ahayn Liiska 'Robinson List' ama waxa u dhigma ee waddankaaga, waa wakhti ku habboon adiga inaad ka faa'iideysato shaqadan cusub ee Apple ay ku dartay taleefannadeeda, mid kale oo si wax ku ool ah u dalbadeen dadka isticmaala waqti wakhti badan. Midda ugu caansan ayaa ah in shirkadaha sameeya wicitaanada xayeysiiska ah ay ku sameeyaan lambarro aanan ku dhex jirin buugga taleefannada ama nambarada gaarka loo leeyahay, sababo jira awgood, tanina waxay si weyn u fududeyn doontaa ikhtiyaarka ka hortagga.
Way fududahay, macruufka 13 wuxuu noo oggolaan doonaa inaan si toos ah u aamusinno dhammaan wicitaannada aan ka helno lambarrada aan la garanayn, tani waxay ka dhigaysaa wicitaannada noocan ah inaysan wax dhib ah naga qabin haddii aan taleefan ku leenahay dhawaqa la hawl-gelinayo iyo in kale, oo keliya waxaan ka qayb-galay hadday tahay xilligan aan isticmaaleyno qalabka iyo dabcan, waxaan jeclaan lahayn inaan sidaas sameyno. Si loo joojiyo dhammaan wicitaannada xayeysiinta ee ku saabsan iPhone-keena waa inaan si fudud u galnaa qaybta Settings-ka, gal qeybta Telefoonka oo guji nambarada aan la aqoon. Tani waxay leedahay laba gees, taasna waa inay aamusinayso dhammaan wicitaannada nambarada aynaan ku lahayn buug-gacmeed kasta, oo aan ku koobnayn oo keliya kuwa gaarka loo leeyahay. Waxaa laga yaabaa inay tahay hawl loogu talagalay in lagu ilaaliyo carruurta yar yar ama Xakamaynta Waalidka. Waxaan rajeyneynaa in muddo kadib Apple ay noo ogolaaneyso inaan aamusino kaliya nambarada qarsoon.
Haddii aad rabto inaad ku sii wargeliso dhammaan wararka ku saabsan in macruufka 13 ku qarsoon yahay betaskeeda iyo dabcan la soco imtixaanada aan ku qabaneyno betasyada kala duwan. Tan awgeed waad ku joogsan kartaa haddaad u aragto inay ku habboon tahay kanaalkayaga Telegram (isku xirka) in ka badan 800 oo isticmaale halkaas oo aad kula wadaagi karto khibradahaaga oo aad talo ka siin karto dadka isticmaala macruufka ee adduunka. Haddii aad ogaatay xeelad ah iOS 13 oo aad rabto inaad noo sheegto, ka faa'iideyso sanduuqa faallooyinka oo ha xishoon, bulshada oo dhan ayaa ka qaybqaadan kara imtixaannada iOS 13 ee aan ku qabanno iPhone News.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Xeeladahan macruufka ah ee iOS 13 ayaa noloshaada kuu fududeyn doona, ha moogaanin